I-Periodontitis: izimpawu, ukwelashwa nokuvimbela > Izinkinga zesifo sikashukela
I-Periodontitis: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa nokuvimbela
I-Periodontitis yisifo esivuvukisayo sohlelo lwezinzwa zesisu, okubandakanya usimende wezimpande, i-fibrous periodontium, amathambo kasokisi nezinsini. Uma isiguli sinezinga elikhulu le-plaque namatshe emgodleni womlomo ngenxa yenhlanzeko yokungahlanzeki, ukuhamba kwamazinyo nokuvezwa kwezintamo zazo, izinsini ezikhipha ukopha nokuphefumula okubi, kungenzeka kakhulu ukuthi abe nokukhula kwe-periodontitis.
Isibonakaliso esibonakalayo sokuthuthuka kwalesi sifo ukwakhiwa kwamaphakethe we-periodontal phakathi kwe-gum kanye nempande yezinyo. Zingaqukatha amatshe we-subgingival, ukhunta, ukushayeka kwegazi. Ngobukhulu besikhwama esifinyelela ku-4 mm, i-hyperemia nokuvuvukala kwezinsini ngaphandle kokuhamba kwamazinyo kubhekwa njengokuthuthuka kwezinga eliphansi le-periodontitis. Uma kwakhiwa amaphakethe kusuka ku-4 kuye ku-6 mm ngokuhamba kwamazinyo ezinkomba ze-1-2, khona-ke akhuluma nge-periodontitis yobunzima obulinganiselayo. Kulesi sigaba, isiguli singakhalaza ngezinhlungu nokuphuma kwegazi izinsini, ukungakwazi ukwenza inhlanzeko enhle, ukubukeka komoya omubi. Ngokukhula kwe-periodontitis enzima, amaphakethe anqunywa okungaphezu kuka-6 mm ukujula, amazinyo aqala ukuhamba kuzo zonke izinkomba ngenxa yokungasebenzi kahle, bese kuvela izikhala phakathi kwawo. Izinsini zi-hyperemic, zopha lapho kuthintwa okuncane, okubangela ukusabela kobuhlungu kubantu.
I-Periodontitis nesifo se-periodontal - uyini umehluko?
Imvamisa iziguli zibheka le miqondo emibili njengesifo samazinyo esifanayo, kepha lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Nge-periodontitis, kuhlale kukhona ukusabela okusebenzayo kokuvuvukala, ukopha nokuvuvukala kwezinsini, amaphakethe wesikhashana wokujula okuhlukahlukene nokushukumisa kwezinyo. Ngesifo se-periodontal, i-gum iminyene, i-anemic, azikho amaphokhethi nokuhamba kwamazinyo, kepha izintamo nezimpande zidalulwa kakhulu, okuholela ekuthini kube nezimpawu ezimise okwama-wedge kulezi zindawo.
Izinyathelo eziphambili ekuhleleni ukwelashwa:
ukufundisa isiguli amakhono ahlanzekile okuhlanzeka,
ukuthuthwa kwendle komlomo (ukwelashwa kanye / noma ukukhishwa kwamazinyo),
ukuhlanza ngobungcweti kusuka ngamatshe nangamatshe,
ukwelashwa okuphathelene nokwelapha okujwayelekile,
Ukuhlanzeka ngomlomo okusemthethweni kuyimpoqo ekwelapheni i-periodontitis, ngoba ama-bacterium ama-plaque anomthelela omkhulu ocasulayo kwezicubu zezinsini. Inqubo ifaka ukususwa kwamatshe we-supra- kanye ne-subgingival, ukupenda izintambo zezinyo eziveziwe nokubaphatha ngamalungiselelo aqukethe i-fluorine. Ukususa amatshe, kusetshenziswa amathuluzi esandla noma i-nozzle ye-ultrasonics. Uma inqubo ibuhlungu, i-anesthesia yendawo iyenziwa.
Ukwelashwa kwezidakamizwa endawo
Ngemuva kokususa amadiphozithi amazinyo, izinsini zopha kakhulu, ukudumba, futhi kubuhlungu. Ukuvimbela ukutheleleka kwabo okuthe xaxa kanye nokuvuvukala okwandayo, izixazululo ze-antiseptic zisetshenziswa ngendlela yezicelo, ukufafaza ngokunisela kanye nokugqwala:
I-3% hydrogen peroxide,
1% isixazululo sotshwala i-Chlorophyllipt,
1% isixazululo sotshwala uSalvin,
I-Meridol ene-tin fluoride.
Ukugqoka okwelashwa ngezidakamizwa ezilwa nokuvuvukala kusetshenziswa izinsini amahora angama-1-2.
Ama-gels, amafutha kanye namafutha okugcoba ekwelapheni i-periodontitis:
I-5% i-butadione noma i-dioxidine yamafutha,
U-10% wamafutha e-indomethacin,
Ukwelashwa kokuhlinzwa kwe-periodontitis
Ukungenelela okuhlinzwa kuboniswa ezigulini ezinama-periodontal ajulile (ngaphezu kwama-6 mm) namaphakethe amathambo, ukuvezwa kwengxenye ebalulekile yezimpande ngokungaphumeleli ekwelashweni kwezidakamizwa. I-gingivectomy (ukubukeka kwengxenye yezinsini), ukwelashwa kwamaphakethe we-periodontal (ukugeza, ukususwa kwamatshe nokwelashwa ngezidakamizwa), kwenziwa i-patchwork. Amaphakethe amathambo agcwele izinto zokwenziwa noma zemvelo zokulungisa izicubu nokulapha. Indlela esetshenziswa kabanzi yokuvuselelwa kwezicubu eqondile, lapho i-collagen noma ama-membranes zokwenziwa enza khona amaphutha ethambo.
Ukwelashwa okujwayelekile kwe-periodontitis
Ezokwelapha eziyinkimbinkimbi zalesi sifo, kunconywa izidakamizwa ezingezona ze-steroidal (i-diclofenac, i-indomethacin, njll.), Ama-antimicrobials (isb. Metronidazole), ama-antibiotic (isb. Lincomycin), nama-multivitamine. Ukuqokwa kwezidakamizwa kwenziwa kuphela ngudokotela wamazinyo, ukuxhumanisa ukwelashwa nodokotela obonayo lapho kukhona izifo ezingamahlalakhona esigulini.
Ukwelashwa kwamathambo kufaka phakathi ukugoqwa kwamazinyo eselula (ukubopha komunye nomunye), ukwenziwa kwezindlawu, onogada bomlomo. I-physiotherapy ifaka ukusetshenziswa kwe-hydro- kanye ne-vacuum massage, i-laser.
Ukwelashwa kwe-Periodontitis kufanele kube okubanzi. Ngemuva kokuxubha ochwepheshe, isiguli kumele siqhubeke nokunakekela inhlanzeko yomgogodla womlomo, sisebenzise amazinyo okwelapha anezakhi zezitshalo zokwelapha, ipropolis, usawoti - Parodontol, Chlorophyllum, Parodontax, Lacalut fitoformula, Mexicoidid Dent Active, njll Njengemikhiqizo eyengeziwe yokuhlanzisisa, ungasebenzisa ama-rinsing agents. ngemuva kokudla: "I-Forest Balsamu", iParodontax, "Umsedari weCedari", njll. ekhaya, kunconyelwa ukwenza amakhambi okwelapha (i-chamomile, i-wort yase-St. John, i-calendula) noma i-oak bark Ukusebenzisa Iziphungo kanye infusions njengoba mouthwash.
Isibonakaliso sokuqala kokuqala kwesifo se-periodontal ukubonakala kwezinsini ezikhipha igazi ngesikhathi sokuxubha. Lesi sibonakaliso sokuxilonga kusenesikhathi kufanele kubhekwane naso futhi kuboniswane nodokotela wamazinyo. Ukwelashwa ngesikhathi kwe-gingivitis kungavimbela noma kwehlise ukukhula kwe-periodontitis. Izindlela zokuvimbela zifaka ukuhlanzwa okujwayelekile kwamazinyo kusuka ku-plaque namatshe, ukuhlanzeka okuphelele kwansuku zonke komlomo, ukukhishwa kwamazinyo kanye nokwelashwa, i-prosthetics esifike ngesikhathi. Noma ngabe kunesifiso sokuthola ifa lesifo se-periodontal, ungalahli ithemba. Udinga ukuqapha isimo sezinsini namazinyo, uvivinya njalo izivivinyo, wenze izindlela zokwelashwa ngesikhathi, lapho-ke udokotela wamazinyo ngeke akusheshe akubone nge-periodontitis.
I-Periodontitis ingesinye sezifo zesifo se-periodontal - okungukuthi,
izicubu ezilungisa amazinyo ezindaweni zazo. I-Periodontium ifaka:
usimende wezimpande wamazinyo
I-Periodontitis ihambisana: nokulimazeka okukhulu kwezicubu, ukudalulwa kwezintamo zamazinyo, ukubukeka okuthiwa "amaphakethe" phakathi kwensini nozinyo, ukunqwabelana kwe-tartar, i-plaque kule maphakethi. Ukuvulwa kwamazinyo kubuye kamuva kukhule ngokulahlekelwa kwabo okwengeziwe.
Izifo ze-Periodontal nazo ziyi-gingivitis, isifo se-periodontal.
Izimbangela ze-Noma Kungani I-Periodontitis Ivela
Lesi sifo sivame ukwenzeka ngenxa yesifo sezinsini esingalashwa - i-gingivitis, kepha futhi singakhula ngokuhambisana naso. Zombili lezi zifo zinezimbangela ezifanayo.
Ezinye zezinto ezineqhaza ekulimazeni kwe-periodontal kanye nokuthuthuka kwayo yile:
Ukuba khona kwe-tartar, kanye nokuqhubeka kokwakhiwa kwayo ngamanani amakhulu.
Ukuhlanzeka ngomlomo okunganele.
Ukulimala kwezicubu ezithile ngezikhathi ezithile ngenxa yezimpawu ezingekho emthethweni, ukumunca kokudla okuqinile phakathi kwamazinyo nezinsini, ukuntuleka kwamazinyo nokususwa kwangaphambi kwesikhathi.
Ukubhoboza izihlathi, izindebe, ulimi, kanye nokulunywa ngezikhathi ezithile kwezicubu ezithambile zomgogodla womlomo.
Izifo ezijwayelekile zomzimba.
Ukwanda kokubonakala kwamathe.
Izimbangela zesehlakalo zihlelwe ngokulandelana ukusuka kumthelela omkhulu kwisimo se-periodontal kuya kwesincane. Iqhaza elikhethekile ekuthuthukiseni i-periodontitis kungokwakhiwa kwetartar.
Kwenzekani? noma ukuthi i-periodontitis ivela kanjani futhi ikhula kanjani
Ngokuya kobunzima, i-periodontitis imnene, ilinganisile futhi inzima. Ukuwohloka kokuma kwenzeka, njengomthetho, ngezigaba. Cabanga ngokwenzekayo phakathi nesigaba ngasinye sesifo esithile:
I-period perioditisitis ekhanyayo (isibalo 1) Kulesi sigaba, ukuvuvukala kwezinsini okwenzeka ngesikhathi se-gingivitis kuyakhula, izinsini zihamba kancane ukusuka ezinyobeni, zakha ephaketheni le-periodontal. Kuyo, kubekelwa amapuleti bese kudalwa ama-tartar deposits. Izinsini ziyavuvukala futhi kuyopha. Izinyo alikhululekile okwamanje. Kunephunga elingathandeki emphefumulweni.
I-Periodontitis yobunzima obulinganiselayo (2). Iphakethe le-periodontal lijula, lingafinyelela izingqimba eziphakathi ze-periodontium. Ngasikhathi sinye, sibona ngeso lenyama ukuthi i-gum isuka kude nezinyo, iveze. Amagciwane athela emaphaketheni ami. Ukwakheka kweTartar kuyabonakala kakhulu. Kukhona ukukhululwa kwamazinyo, okusongela ngengozi yokulahleka kwabo. Ukucekelwa phansi kwezicubu zamathambo zangaphakathi ezibambe izinyo kuyaqala.Izinsini zibuhlungu, zikhanyisiwe, ziyopha. Umoya omubi.
I-periodontitis enkulu (3). Ijoyinti le-gingival alikho neze. Izinyo livezwa isiza sezimpande. Inani le-tartar likhulu kakhulu. Izinsini zivuthiwe, zinobuhlungu, ziyavuvukala. Ngokuhambisana, izinqubo ze-alveolar zemihlathi yemihlathi ziyachithwa. Amazinyo athukulula kalula, aze athukulule lapho ehlafuna. Ukuvulwa okungenzeka kwamazinyo angaphambili. Mhlawumbe ukubonakala kokukhipha i-purulent. Umoya omubi uyaqina.
Ukuxhaphaka kwe-periodontitis kungaba:
Okwenziwe endaweni. Nge-periodontitis eyenziwe yasendaweni, ukugxila kwalesi sifo kukhawulelwe izicubu zamazinyo ezithintekile nezizinyo. I-periodontitis eyenziwe yasendaweni ivame ukwenzeka lapho izici zemishini (umqhele ofakwe kahle, i-prosthesis, njll.) Zithinta inkathi ethile yesikhathi. I-periodontitis eyenziwe yasendaweni kungenzeka ingafinyeleli kwezinye izingxenye ze-periodontium, kodwa futhi ingakhula ibe yenziwa jikelele.
I-periodontitis ejwayelekile ihlanganisa izicubu ezithile zomhlathi wonke noma wonke umgogodla womlomo.
Isifo Sokuxilonga I-Periodontitis
Izindlela eziningana zisetshenziselwa ukuthola i-periodontitis, kuye ngokuthi ubukhulu besifo.
Isinyathelo sokuqala salokhu kuxilonga ukubonisana, lapho udokotela efunda khona mayelana nezikhalazo zesiguli, imizwa yakhe, nesikhathi sokubukeka kwabo.
Lokhu kulandelwa ukuhlolwa, okuvumela udokotela ukuthi ahlole isimo sethambo lomlomo. Imvamisa, udokotela wamazinyo uhlola isimo sokuhlanzeka ngomlomo, ukuba khona noma ukungabikho kwe-tartar. Udokotela usebenzisa ithuluzi elikhethekile ukuthola ukuthi amaphakethe we-periodontal ashiwo kanjani.
Ngaphezu kwalokho, uma kunesidingo, sebenzisa indlela yokuxilonga efana nama-x-ray. Ikuvumela ukuthi uhlole isimo sesifo se-periodontal, ubone futhi unqume ubukhulu bokulimala kwezicubu zamathambo, futhi futhi unqume ukuthi yimaphi amazinyo athinteka yi-periodontitis. Udokotela angaphinde akhombise i-tomogram enezici ezintathu ukudala isithombe esiphelele salesi sifo.
Ngemuva kwalezi zinqubo zokuxilonga, udokotela wamazinyo unquma ubungako besifo sezinyo lezinyo ngalinye, ubukhulu bamaphakethe we-gingival futhi ubhala imininingwane emephini yezinyo (i-periodontograph).
Uma kunesidingo, isiguli sidluliselwa kwezinye izivivinyo noma ukuqokwa nabanye odokotela uma izimpawu zezinye izifo zihlanganiswa nezimpawu ze-periodontitis.
I-Periodontitis - Lesi isifo samazinyo, ngenxa yalokho ukubhujiswa kwenhlanganisela ye-gingival kwenzeka. I-Gingivitis, okungukuthi, ukuvuvukala kwezinsini, kuyisigaba sokuqala se-periodontitis, kamuva inqubo yokuvuvukala iya kwamanye izicubu ze-periodontal, okuholela ekubhujisweni kwenqubo ye-periodontal and bone izicubu zenqubo ye-alveolar. Ukulahlekelwa kwamazinyo esemdala eminyakeni yobudala emacaleni amaningi kungenxa ye-periodontitis ejwayelekile.
Imbangela enkulu yalokhu kwenzeka ukunqwabelana kwama-plaque, okuqina futhi kwakha i-tartar. Ukubhema nokuhlafuna ugwayi ngenxa yezizathu eziningi kunomthelela ekwakhiweni kwe-periodontitis. Ngakho-ke, ugwayi wehlisela kabusha ukusebenza kwamasosha omzimba, ngenxa yokuthi ingozi yokutheleleka kwe-periodontal nge-microflora ye-pathogenic ikhuphuka. Izinto eziqukethwe ugwayi, ezisebenzisana namathe, zakha izimo ezinhle empilweni ye-microflora ye-pathogenic. Futhi, ukubhema kunciphisa kakhulu inqubo yokwenziwa kabusha kwamaseli, okuthinta inkambo ye-periodontitis.
I-prederedposition ye-Hereditary ayivelakancane, kepha iba imbangela eyinhloko yentuthuko. Kulokhu, ngaphandle kokuthi isiguli siyinakekela ngokucophelela imithambo yomlomo, i-gingivitis iyakhula, bese kuba ne-periodontitis.
Ukukhiqizwa kwamathe okwehlisiwe kungangezelela ukwakheka kwe-plaque kanye ne-tartar, njengoba inqubo yokuhlanzwa kwemvelo yomlomo wesibeletho iphazamiseka. Ama-antidepressants, izidakamizwa ezilwa nokuvuvukala, ikakhulukazi ngokusebenza isikhathi eside, anciphisa kakhulu ukukhiqizwa kwamathe. Ama-anticonvulsants, ama-immunosuppressants, ama-calcium tubule blockers angadala i-gingival hyperplasia, okwenza ukunakekelwa ngomlomo kube nzima. Ngenxa yalokhu, i-tartar yakhiwa ngokushesha okukhulu, okuba imbangela ye-periodontitis.
Ezigulini ezinesifo sikashukela, i-periodontitis itholakala kaningi kaningi, ngenkathi ukwelashwa kungalethi imiphumela. Izinguquko ngemuva kwesizinda se-hormonal ngenxa yokukhulelwa, i-lactation, ukuhamba kokuya esikhathini kubangela ushintsho emasosheni omzimba, okuthinta ukukhula kwe-periodontitis, futhi uma owesifazane enesifo se-gingivitis ngaphambi kokukhulelwa, inqubo yokuvuvukala iqala ukuthuthuka.
Ukushoda kwamavithamini C no-B ngenxa yokuphulwa kwe-digestibility yabo noma ngenxa yokungondleki kahle kungenye yezinto ezingaba isixhumanisi esikhulu se-pathogenetic ekwakhiweni kwe-periodontitis. Ukushoda kweCalcium kuthinta kabi lonke uhlelo lwamathambo, kufaka phakathi i-dentition, njengoba i-calcium ibalulekile emathanjeni, ikakhulukazi kulawo asekela amazinyo. Abantu abangayitholi i-Vitamin C basengozini yokukhula kwe-periodontitis ngenxa yokwehla kwamandla kwezicubu ezixhunyiwe. Kwabhemayo, ukusweleka kwe-Vitamin C kukhulunywa ngaphezulu.
Ukusetshenziswa njalo kokudla okuthambile ngokweqile akunikezeli umthwalo odingekayo emazinyweni ngesikhathi sokuhlafuna, okunciphisa ikhwalithi yamazinyo wokuzihlanza. Ukuthuthukiswa kwe-periodontitis nakho kunomthelela kumkhuba omubi wokuhlafuna ohlangothini olulodwa, ngoba kuleli cala umthwalo wokusebenza usatshalaliswa ngokungalingani. Kubantu abane-malocclusion namazinyo angajwayelekile, i-periodontitis ivame ukutholakala.
I-Periodontitis ingahlukaniswa ngezigaba eziningana, ezahlukahlukene ngobukhulu besifo, ubukhulu bezimpawu, ukuba khona noma ukungabikho kwezinkinga. Ukukhetha ukwelashwa okungcono kakhulu, udokotela wamazinyo kufanele asungule uhlobo lwalesi sifo.
Ngokuhamba kwe-pathology, izinhlobo zayo ezimbili ziyahlukaniswa:
i-acute: izimpawu ziyavela ngokuzumayo, inqubo yokuvuvukala iba ngokushesha, izinkinga ngesimo se-fistulas noma ukulimala kwamazinyo nezinsini kwenzeka ezinyangeni ezimbili,
okungapheli: Izimpawu ze-periodontitis ziyafiphala, inqubo yokuvuvukala iyavilapha, ukubhujiswa kwezicubu kwenzeka kancane kancane futhi kancane kancane.
Ngenxa yokuthi uhlobo olubi lwe-periodontitis lubonakala ngezimpawu ezicacile ezibangela ukungaphatheki kahle, ukwelashwa kuvame ukuqala ngokushesha.Isifo esingalapheki ungaqhubeka unganakwa kuze kudlule esigabeni esinzima.
Endaweni yokutheleleka, i-periodontitis ingagxila (yenziwe yasendaweni) noma yenziwe ibanzi. Esimweni sokuqala, indawo encane yezicubu ihlushwa, okwesibili, indawo enkulu ye-periodontal iyathinteka, eqinisa kakhulu inqubo yokwelashwa.
Ngokuya kobunzima besi sifo sehlukaniswe:
mnene: Izimpawu zimnene futhi azibangeli ukukhathazeka okukhulu, amaphakethe angafika ku-3 mm ajulile angavela, ukubhujiswa kwamathambo akunandaba,
maphakathi: izikhala emaphaketheni ziphindwe kabili, ukuhlanganiswa kwezimpande kuchithwe uhhafu, kuvela izinyo,
kakhulu: ukuguqulwa kwesikhashana kwe-septum yezilimi eziqala kuqala, amaphakethe abe makhulu, ukudla okukungena kuwo kuyacasula izimbumbulu.
Isithombe: izigaba zokukhula kwe-periodontitis
I-periodontitis enkulu kakhulu ayisebenzi, futhi kaningi akunakwenzeka ukulungisa izicubu ezonakele.
Isizathu esikhulu se-periodontitis ukuphindaphindeka kwamagciwane we-pathogenic akhuthaza ukutheleleka. Izici ezahlukahlukene zingaba nomthelela kule nqubo ye-pathological, lokhu kufaka:
izifo ezenza buthaka amasosha omzimba,
hypertonicity yezicubu zomhlathi,
ukulimala kolwelwesi lwe-mucous lomgogodla womlomo,
izingcindezi nemikhuba emibi,
izifo ezithinta i-acid-base esele emzimbeni,
Enye yezinto ezifakelayo ekuqaleni kwe-periodontitis ukungondleki kahle. Ukuntuleka kwamavithamini kwenza buthaka amasosha omzimba, futhi inani elanele lokudla okuqinile liholela ekuwohliseni kancane kwezicubu zamathambo.
Ukuhlolwa okungajwayelekile okwenziwa udokotela wamazinyo kukhulisa amathuba okuba ne-periodontitis ethuthukile. I-gingivitis yaphambilini ivame ukwenzeka ngaphandle kwezimpawu eziphawuliwe, futhi yingcweti kuphela elingabona inqubo ye-pathological. Ukuvakashela udokotela okufika ngesikhathi kukuvumela ukuthi ubone ukwephulwa ngesikhathi futhi ukukuqede ngokushesha.
I-Periodontitis ivame ukukhula kubantu abadala, endaweni yobungozi obuthile - abantu abaneminyaka engu-16 kuye kwengama-30 ubudala. Ukusetshenziswa njalo kotshwala noma ukubhema kukhulisa amathuba okukhula ngokushesha kwenqubo yokuvuvukala ezinsini. Uma udokotela wamazinyo angakwazi ukuthola ngokuqondile imvelaphi ye-pathology, kuzoba lula ukwelapha, kepha ngeke kube khona ukuguqukela kwesifo se-periodontal.
Ukulungiselela okuvela phezulu kusiza ukususa izimpawu zokuvuvukala futhi kucindezele umsebenzi we-pathogenic microorganisms. Kukho konke ukwelashwa, isiguli kufanele siphathe i-cavity yomlomo njalo ngemithi elwa nokuvuvukala ne-antiseptic. Isetshenziselwe lezi zinhloso:
izixazululo: Maraslavin, Chlorhexidine, Chlorophyllipt, Rotokan,
amagugu: Holisal, Metrogil Denta, Traumeel, Levomekol,
izinyo lezinyo elikhethekile: I-Parodontax, i-Lakalyut-esebenzayo.
Izidakamizwa eziningi zilungele ukwelashwa kwabantu abadala, kepha zenqatshelwe ezinganeni.
Ngokukhula ngokushesha kwe-periodontitis noma ifomu elinganakiwe, ama-antibiotics angadingeka: iKlindomycin, iTarivid, iLogomycin. Kunconywa ukusebenzisa amalungiselelo wethebhulethi: imijovo ayisetshenziswanga ngenxa yokugxila kakhulu kwento esebenzayo endaweni yenkinga, ngoba inomthelela ekubhujisweni kokunamathiselwe kwe-gingival.
Ngaphezu kwalokho, kukhethwe ama-vitamin-mineral complexes ukukhulisa ukungatheleleki futhi kuthuthukise ukumelana nomzimba wenqubo yokuvuvukala. Uma kunesidingo, kunqunywe i-immunomodulator Immudon.
Ngezinkinga ezinkulu ze-periodontal kubantu abadala, izinqubo ezilandelayo zinconywa ngaphezu kwalokho:
amaza e-ultrasonic okuqinisa izinsini,
Zonke izinqubo azinhlungu futhi zenziwa emtholampilo wamazinyo. EMoscow, isidingo sezinsizakalo ezinjalo siphakeme kakhulu kunasemadolobheni amancane.
Isifo sezinsini esingamahlalakhona noma i-periodontitis ingahle ibangelwe yi-malocclusion, ukuntuleka kwamazinyo, noma ukufakwa kwehlulekile. Uma imbangela yalesi sifo yile, ochwepheshe batusa ukuthi kungeniswe esikhundleni sokufakelwa, i-prosthetics noma ukufaka uhlelo lokubakaki.
Kafushane ngalesi sifo
I-Periodontitis ihambisana nenqubo yokuvuvukala okungamahlalakhona okwenzeka izicubu ze-periodontal. I-Pathology iholela ekushintsheni okubhubhisayo kwezicubu zamathambo nokusebenza kwe-ligamentous.
I-Periodontitis ayenzeki ngokuzumayo, cishe njalo yandulelwa yisifo esinezimpawu ezifanayo, kodwa eziphinyiselwe kancane. I-Gingivitis - ukuvuvukala kolwelwesi lwama-mucous zezinsini, kungabhekwa njengesizathu esiyinhloko sokuthuthukiswa kwe-periodontitis.
Ngabe kuhamba kanjani lokhu? I-Etiology ne-pathogenesis
Iphethini yokuthuthuka kwalesi sifo ilula. Ake sibheke kabanzi ngemininingwane.
Ngemuva kokudla ngakunye, izingcezu ezincane kakhulu zokudla zihlala emazinyweni omuntu. IStreptococcus mutans (Ama-Streptococcus mutans) kanye ne-Streptococcus sangius (I-Streptococcus sanguis), kanye ne-Actinomycetes yizakhamuzi ezihlala emgodini womlomo. Ukudla okusele kubo kuyindawo evundile yokukhula, intuthuko nokukhiqiza kabusha. Ngokuthatha i-carbohydrate, ama-pathogenic microorganisms akhiqiza ama-lactic acid, aphula i-koqweqwe lwawo futhi enze izinyo libe sengozini. Lokhu kunomthelela ekuthuthukiseni ama-caries.
Izinhlayiya ezincane kakhulu zokudla ezikhiqiza izigidi zama-bacterium angama-microscopic abizwa ngokuthi ukuqhuma okuthambile. Uma umuntu egeza amazinyo nsuku zonke, uyazivikela ezifweni eziyingozi. Ukuhlanganiswa okuthambile kuvela ngokushesha ngemuva kokudla, ukuguqulwa kwayo kube ngamadiphozithi aqala kuqala ngemuva kwemizuzu engama-20-30. Ukufakwa kwamazinyo amnyama amnyama, okunamathela ngokuqinile ezintanyeni zamazinyo - lokhu akuhlanzwa ngesikhathi futhi kufakwe ipulangwe ethambile.
Ngabe ukuvuvukala kwezinsini kwenzeka kanjani?
Uma kungekho ukwelashwa, ama-deposits kanzima akhula ngokujulile ezinsinini futhi awalimaze. Lokhu kusiza ukususa i-mucosa ezinsweni nokubukeka kwesikhala samahhala phakathi kwabo. Izimbobo ezivelayo zigcwaliswa ngama-microorganisms we-pathogenic kanye nemfucumfucu yokudla. Izimpawu zangempela ze-gingivitis ukopha, ubomvu, ukuvuvukala, nokulunywa kwezinsini. Njengamanje kulesi sigaba, ngemuva kokuthola izimpawu zokuqala zalesi sifo, kufanele uthintane nodokotela wamazinyo ngokushesha. Guqula i-gingivitis ibe i-acute periodontitis kungenzeka kungenzeki. Ukwanda okusheshayo kwemali eqinile kuholela emaphaketheni we-gingival, ukuvuvukala ku-periodontium kanye nokuthuthukiswa kwezici zayo zakudala.
Ngenhla, sihlole isizathu esaziwa kakhulu sokuthi kungani kuvela isifo. Kunezici ezimbalwa eziba nomthelela ekubukekeni kwe-periodontitis kanye nokuqhubeka kwayo.
Izimbangela zenkambiso yendawo:
Izenzo zobudlova ezenziwe kabi
Ukugcwaliswa okusetshenziswe kabi (ukuntuleka kwezikhala eziphakathi, imiphetho ebukhali).
I-periodontitis eyakhelwe ngaphakathi noma egxila ithinta kuphela izingxenye ezithile eduze kwezicubu zamazinyo, ngaphandle kokuthinta izindawo ezingomakhelwane ezinempilo. Ukuthuthukiswa kwezifo ze-pathology kusuka ekulimaleni kwezicubu ezihlelekile. Ezimweni eziningi, i-ebalulekile periodontitis inefomu elibi lekhosi, elihambisana nobuhlungu obukhulu nezimpawu ezicacile zokuvuvukala. Uma kungekho ukwelashwa okufika ngesikhathi nokuqedwa kwesici esibuhlungu, lesi sifo sidlulela kwifomu elingalapheki eliyisidina.
Izimbangela ze-periodontitis ejwayelekile:
Ukuntuleka kwenhlanzeko efanele yomlomo
Ukuzivikela komzimba okuphansi
Ukuntuleka kwezithelo eziqinile nemifino emenyu,
Imiphumela ehlelekile emgodini womlomo wama-agents anolaka (ukubhema, utshwala),
Ukuphazamiseka kwesizinda se-hormonal (ukukhulelwa, ukuya ebusheni, isigaba sokuya esikhathini),
Ngabe i-periodontitis ibonakaliswa kanjani?
I-Pathology ihambisana nezimpawu ezinzima futhi iletha ukuphazamiseka okuningi. Izimpawu zokuqala umoya omubi, ukulunywa, ukuvuvukala, isifo sezinsini nokopha. Ekuhlolweni okubonakalayo, amazinyo esiguli ambozwe ngama-hard pigment amana. Uma umuntu engasusi isifo ngalesi sikhathi, khona-ke kuvela izithiyo ezingathi sína.
Ukuvezwa kwamazinyo ezimpandeni.
Ukuthuthukiswa kwe-hypersensitivity yezinyo.
Ukwakheka kwamaphakethe ajulile we-periodontal, ukugeleza kokulimala kubo.
Ukuhlukaniswa kokuqukethwe kwe-pathological ezimpandeni zamazinyo.
Ukwehla kwamazinyo, indawocclusion.
Ukuvela kwamazinyo angalapheki.
Ukuqothuka nokulimala kwamazinyo.
Uma umuntu efuna ukunakekelwa kwamazinyo sekwephuze kakhulu, amazinyo akhe esele kakhulu, izimpande zivezwe ngangokunokwenzeka, khona-ke ngeshwa akunakwenzeka ukusindisa amayunithi wemvelo. Kulokhu, kuyadingeka ukufeza ukukhishwa kwamazinyo kanye nokubuyisa ukulahleka usebenzisa indlela yesimanjemanje ye-prosthetics.
I-Periodontitis ihambisana nezimpawu ezingemnandi eziphazamisa impilo yomuntu futhi zimenze angajabuli. Uma ungafuni ukuhlukana namazinyo emvelo ngaphambi kwesikhathi futhi ube ikhasimende lodokotela wamazinyo, qapha impilo yakho ngokucophelela. Ukopha kanye nokuhlehliswa kwezinsini, ukuhamba kwamazinyo, ukuphefumula okubi, ukwakheka kwamaphakethe we-volumetric periodontal kanye nokukhululwa komoya kuzo kuyizimpawu okungafanele zinakwe. Ukwelashwa ngesikhathi kuqinisekisa ukuthi isiguli sigcina ukumamatheka okunempilo nokungabikho kwezinkinga.
Izimbangela eziphambili ze-periodontitis
Lapho ucubungula izimbangela eziba nomthelela wokuthi kuvela kwe-periodontitis, kuyadingeka ukuthola oyinhloko wawo, oqukethe ukuqina kwezicubu zegazi le-periodontal. Kuvela ngenxa yokudla ukudla okucolisisiwe nokuthambile, okungasebenzisi umthwalo odingekayo emhlathini. Ngenxa yokuqina kwegazi, kwakheka indawo efanelekile yokutheleleka, evimbela amaseli omzimba abalelwa ngumzimba ukuba afike ezingxenyeni zokutheleleka.
Izinga elingahambelani nenhlanzeko yomlomo namaphutha odokotela bamazinyo abavela ohlelweni lokugcwalisa kanye ne-prosthetics kumele futhi bakhonjwe njengezinto ezinomthelela ekwakhiweni kwe-periodontitis. Akuyona indawo yokugcina ehlala izinto ezifana ne-atherosulinosis nezifo zesisu, ukubhema nokukhulelwa, isifo sikashukela nokusetshenziswa okusebenzayo kwemithi, izifo ezihlobene nokuqubuka kwezitho zangasese kanye nezimo zokuphila ezingezinhle (ukuntuleka kwamavithamini, izici zemvelo, njll.). Amanye amacala abuye anqume isiphetho sendlalifa njengento ethinta ukwakheka kwe-periodontitis. I-Periodontitis ingavezwa ngendlela yezindlela ezimbili zokwelapha, ngalinye linqunywa ngokususelwa ebangeni lokutholakala kwalo. Ngakho-ke, i-periodontitis ingaba yendawo noma yenziwe yaba yodwa.
I-periodontitis yendawo: izimpawu
Le ndlela yalesi sifo inesimo sendawo yasendaweni, okungukuthi, ayilimazi ngokuphelele indawo yokuhlala, kepha itholakala kuphela endaweni yamazinyo ambalwa. Ukuthuthukiswa kwalesi sifo kwenzeka ngenxa yokwenza kusebenze izinto zasendaweni zesilinganiso sesibili, okuwukuthi, nge-occlusion pathology nokulimala, ngokugcwaliswa kwezinga eliphansi kanye ne-prostheses, ngezinto zokugcwala noma i-arsenic paste, njll.
Leli fomu livame ukusebenza kuphela emigodini yezinyo elilodwa, kuyilapho imbangela yokuthuthuka kwalesi sifo ngamasenti aqondile, akhula kusukela engxenyeni yezinyo eliseduze nesiqu. Futhi, imbangela ye-periodontitis yasendaweni ingaba ukulimala. Ingakhiwa izingcezu zokudla eziboshwe phakathi kwamazinyo, futhi kungaba ukulimala kusuka ku-floss yamazinyo noma emaphethelweni wokugcwaliswa okuphukile.
Izimpawu ze-periodontitis yendawo zikhonjiswa kokulandelayo:
Ukuxhumana njalo phakathi kwamazinyo okudla endaweni ethile, kuhambisana nobuhlungu obukhulu,
Umuzwa wamazinyo "okukhululekile"
Ukuncipha okubonakalayo noma ukuqina endaweni ethintekile, okunomthelela ekuqubukeni kwenqwaba yemizwa engemnandi,
Ukwakheka kwamaphakethe we-gingival ngokuvela kobuhlungu kubo lapho amanzi noma ukudla kungena. Ukwelashwa kubandakanya ukususwa okuphoqelekile kwamaphakethe anjalo.
Ifomu elibi lenkambo yesifo ngokubhujiswa okukhulu komgodi wamazinyo, kanye nokwakheka kwamathumba,
Ukubhujiswa okubalulekile kwezicubu ezisondelene nezinyo kungaholela ekususweni kwayo.
I-periodontitis ejwayelekile: izimpawu
Le ndlela ye-periodontitis ibonakala ngenkambo yayo engapheli. I-lesion ithinta amazinyo amabili ngokushesha, ngokulandelana, amelela inkinga enkulu kakhulu kunendlela yangaphambilini yesifo. Izimpawu ezinkulu yilezi:
I-gingivitis ephezulu (isifo sezinsini) esingesihle, okuholela ekubhujisweni kancane kancane kwezicubu ezizungeze izinyo,
Ukucekelwa phansi kwamalunga we-gingival kanye nemisipha yamazinyo,
Ubuhlungu, ukopha, okwenziwe endaweni entanyeni yezinyo (amazinyo),
Ukwakheka kwe-plaque ne-tartar,
Ukuhlukaniswa nobomvu ngaphansi kwezinsini
Ukwakhiwa kwamaphakethe we-periodontal (izikhala ze-pathological ezakheka phakathi kwe-periodontal kanye nezinyo), okusebenza njengophawu oluphambili lwalesi sifo.
I-Periodontitis: izimpawu ezinamazinga ezifo ahlukahlukene
Kulesi sifo, njengoba, impela, izifo eziningi zohlobo oluhlukile, ukuhambelana kwethilidi elithile noma elinye kuya kobulukhuni kuyimpawu. Ubukhulu ngokwako buxhomeke ngqo kusilinganiso sokukhula kwezimpawu ze-periodontitis, okungukuthi ekujuleni kwephakethe le-periodontal elibunjiwe, ngezinga lokuphinda kuqhathaniswe nakho kwezicubu zamathambo nasekuhambeni okujwayelekile kwamazinyo. Ngakho-ke, ubukhulu be-periodontitis bunquma nezindlela ezifanele ezisetshenziswayo ekwelashweni.
Degree Easy. Kulokhu, i-periodontitis kunqunywa ngokuqina kwezimpawu. Amaphakethe we-Periodontal anokujula okungaba ngu-3,5 mm, ukuqunjelwa kwezicubu kusesigabeni sokuqala futhi kutholakala ngaphakathi kwe-terta yezikhathi. Izinsini zokuopha zilondolozwa kuphela uma kwenzeka kunethonya mehendi kubo, ukulunywa nakho kungenzeka. Njengomthetho, lesi simo asiholeli ekuhluphekeni kwesiguli.
I-Medium degree. Kulokhu, iphakethe le-periodontal lifinyelela kumamitha ayi-5 ukujula, ithuna elihlangene lincibilika ngesigamu. Amazinyo abonakala ngokuhamba kwe-pathological okuhambelana ne-I-II degree. Lapha, izikhala zingakheka phakathi kwamazinyo, kanye nokukhuluma kobuhlungu. Kuyafaneleka ukuthi uqaphele ukuthi izinga le-I lokuhamba linquma ukumangalisa kwamazinyo, okwenzeka emuva naphambili. Ibanga II libonakaliswa ngokudluliselwa kwamazinyo emikhondweni emibili, okungukuthi, phambili nokubuyela emuva, futhi ngokuhamba kwesikhathi. Futhi ekugcineni, idigri ye-III ibonakala ngokududulwa kwamazinyo ngaphambili nangasemuva, kanye nasezinhlangothini nasezansi-up. Izinga eliphakathi libuye libonwe yizinguquko ezijwayelekile ekubukekeni kwezinsini ngokuvela kwe-halitosis.
Iziqu ezikhulu. Lapha, njengoba kucaca, inqubo isivele ihambile impela, ngokulandelana, kunokwanda kwepokhethi ye-periodontal (ngaphezu kwama-5 mm), ukwanda kokuhamba ukuya kufinyelela kwe-II-III degree, resorption ye-septum ye-interdental ngaphezulu kwesigamu (kwezinye izimo, ngokuphelele). Kuvezwa izikhala ezibalulekile phakathi kwamazinyo, futhi kuvela nezinye iziphambeko ezihlobene ngqo nokukhishwa kwendawo. Amadigri akhonjisiwe we-periodontitis avame ukubonakaliswa ekwakhekeni kwama-abscesses nasendleleni yokukhuculula ubomvu.
I-Periodontitis, okuyizimpawu zayo okuyizimpawu zobuhlungu obukhali ezinsini nokuvela kwezinkinga lapho kuhlafunwa, ngokweqile kubonakalisa ukwephula isimo esijwayelekile, ekwandeni kwezinga lokushisa.
Ngenqubo yokuvuvukala kwezicubu ze-periodontal, inkambo yayo ehlukile iyisici, esingenzeka ngokuhlukahluka okukhulu okukhulu kokukhula kwayo:
Ukubhujiswa kwepuleti yangaphandle (i-cortical), ukuvuvukala kusakazeka kuthambo elikhanseliwe,
Inqubo isakazeka eduze kwegebe le-periodontal (okungukuthi, phakathi kwesikhala phakathi kwethambo nempande yezinyo). Kulokhu, ukwakheka kwamathumba namaphakethe ajulile wethambo kuyabonakala,
Inqubo ifinyelela kwi-periosteum, yakha amaphakeji anjalo wokuphamba acoce ubandlululo lokutholakala kabusha kwezicubu zamathambo.
Izinketho ezifakwe kuhlu, ezibonisa ukwanda kwenqubo yokuvuvukala, zivame ukwenzeka hhayi ngedwa, kepha futhi lapho zihlanganiswa.
I-Periodontitis: Izimpawu ezihambisana nezinye izifo
Isifo esinjenge-periodontitis singenzeki ngendlela engayodwa, okungukuthi, ngaphandle kokuthinta ukubonakaliswa komzimba wonke. Ngakho-ke, ngaphezu kwethonya elivezwe esimweni esivamile, i-periodontitis nayo ingadala ezinye izifo, zithinte, okokuqala, ezinye izitho nezicubu ohlelweni lwamazinyo. Uma, ngokwesibonelo, ukutheleleka okubangelwa i-periodontitis kungena egatsheni egatsheni lezinyo, kungavusa ukuvuvukala okuhambelanayo, okungukuthi, i-pulpitis. Ukuxilongwa kuleli cala kuyinkimbinkimbi ngenxa yokungabikho kokulimala kwamazinyo. Ngokubuyela njalo kwe-periodontitis, izilonda ezisethanjeni lamathambo nazo zingavela, kuvezwe njengokuvuvukala kwezicubu zamathambo (osteomyelitis). Kwezinye izimo, lesi sifo siyinkimbinkimbi yezifo ezithathelwanayo ezicutshini ezithambile (i-phlegmon namathumba).
Izindlela ze-Hardware zokwelapha i-periodontitis zibhekwa njengezisebenza kakhulu neziphephe kunazo zonke. Ziyabonakala ngentengo yazo ephezulu, kodwa zikuvumela ukuba ubuyisele ngokushesha futhi ngokuthembekile isimo sezicubu ezithambile.
I-Laser Ikuvumela ukuthi ususe ngaphandle kobuhlungu kwezinkinga zezinsini ukuyeka ukuvuvukala nokubhubhisa amagciwane. Ingozi yokuvuselelwa kabusha incane.
I-Vector. Lokhu kungumshini we-ultrasound oqondayo okhipha ubuthi, uphulukise izinsini futhi uqede i-plaque enamatshe neyakhiwe.
I-Ultrasound Ikuvumela ukuthi ususe itshe le-subgingival, hlanza amaphakethe wesikhathi sokulahlwa kokudla.
Noma yiziphi izindlela ze-Hardware ezisetshenziswa ngokuhlanganiswa nokwelashwa kwezidakamizwa.
Uma ukwelashwa okwenziwa ekhaya noma okujwayelekile ngemithi kungalethi imiphumela efiselekayo futhi ukuthuthukiswa kwe-periodontitis kungavalwa, odokotela bamazinyo batusa ukwelapha le nkinga ngokuhlinzwa. Kwenziwe:
I-Gingivectomy - Ukuhlanzwa kwamaphakethe we-periodontal, ukususwa okuyingxenye kwezindawo ezinamakhaza. Isetshenziselwa uhlobo lwasendaweni lwesifo.
Ukukhula kwamathambo. Kubalulekile ekulahlekelweni kwezicubu okubalulekile.
Ukusebenza kwe-patchwork. Kwenziwa ngokuvezwa kwempande yezinyo. Amaphakethe ayahlanzwa, kube ne-mucosa enempilo kuqedwe isiqephu esincane, esifanelana nendawo yenkinga futhi sixhunywe ngama-sutures. Indlela ikuvumela ukuthi ufihle izimpande futhi uqinise izinsini.
Ukuphrinta. Imikhosi iyavuselelwa ukuvimbela ukulahleka kwamazinyo nokugcina izinyo lisokhethi.
IGingivoplasty - emaphaketheni okuhlanza, amboze izimpande ngezinto ezivikelayo. Uma kunesidingo, ukufakelwa kwamathambo noma ukuvuselelwa kwe-epithelium kwenzeka.
Ukungenelela kokuhlinzwa kungelapha i-periodontitis esezingeni eliphezulu futhi kuvikele nezinkinga ezingakhona.
Izindlela zokupheka zemithi yendabuko zivame ukusetshenziswa njengama-adjuvants futhi azinakukhipha ngokuphelele ukwelashwa kwezidakamizwa noma ukwelashwa okuhlinzwa. Bayakuvumela ukuba ususe ngokushesha izimpawu ezingemnandi futhi usheshise inqubo yokupholisa izicubu.
Ngemvume kadokotela, ungafaka isicelo:
Massage Amafutha e-Fir ne-sea-buckthorn (isilinganiso esifanele ngu-1: 1) axutshwe, afakwa ngebhandeji eliyinyumba, elingabhula kalula izinsini ngemizuzu engama-5 ukuya kwengama-10. Inqubo idinga ukwenziwa kabili ngosuku.
Sula usizo. Isipuni sempande eyomile ye-comfrey sithululelwa ngamanzi ayi-250 ml, silethwe ngamathumba phezu kokushisa okuphansi. Ingxube ishuthelwa imizuzu engama-30, ipholisa, ihlungiwe.
Isixazululo. I-ithisipuni lamagxolo e-oki ahlanganisiwe lithululelwa ngo-200 ml wamanzi abilayo, alethwe ngamathumba phezu kokushisa okuphansi. Kufakwa kumazinga okushisa ekamelo, ahlungiwe. Hlanza umlomo wakho njalo emahoreni angama-2-3.
Ngobuhlungu obukhulu, ungasebenzisa isisombululo se-antiseptic: isipuni se-soda ne-sodium chloride engilazini yamanzi afudumele. Badinga ukuhlamba imilomo yabo njalo ngehora, ngemuva kokwenza izicelo ezimbalwa izinhlungu ezinciphile.